WIIL HOOG: Halkan Kaga Boggo Xariifka Sababay Ganaaxa Man City, Xabsiga La Dhex Dhigay, Codsiga Jamaahiirta Dunida & Faah-Faahinta Qaabkii Uu Wax U Waday. - Gool24.Net
WIIL HOOG: Halkan Kaga Boggo Xariifka Sababay Ganaaxa Man City, Xabsiga La Dhex Dhigay, Codsiga Jamaahiirta Dunida & Faah-Faahinta Qaabkii Uu Wax U Waday.
Kaddib shaacintii ganaaxa Manchester City, Waxa warbixino kala duwan laga qorayaa Rui Pinto oo ah nin Portugal kasoo jeeda xariifna ku ah jabsashada xogaha kala duwan ee koombuyuutarada ku salaysan isagoo ah shaqsiyaadka afka qalaad lagu yidhaahdo “Hackers-ka”.
Pinto ayaa ka shaqayn jiray shabakada faafinta siraha kubadda cagta ee Football Leaks isaga oo ahaa ninka UEFA gacanta u galiyay Manchester City ee banaanka keenay qaladaadka ay ka galeen sharciga FFP.
Tan iyo sanadkii 2015, Pinto ayaa ahaa mid ku dhex adeegta gurigiisa Portugal ku yaala isagoo jabsanayay xogaha kala duwan ee kubadda cagta isla markaana gacanta u gelinayay saxaafada oo soo bandhigaysay.
Muwaadinkan ree Portugal ayaa ahaa mid dunida kubadda cagtu ay si weyn u taageertay maadaama oo uu inta badan dadka tusayay waxa qaldan ee daaha dabadiisa ka socda laakiin waxa xaqiiqo ah inuu haatan xabsi ku jiro.
Rui Pinto ayaa xidhnaa tan iyo bishii March ee sanadkii hore waxaana la filayaa inuu wajaho 90 kiis oo loogu haysto xogo uu jabsaday iyadoo ay xusid mudan tahay in Khamiistii laga soo diiday racfaan uu qaatay.
Intaa waxa dheer in barta Twitter-ka uu xalay qabsaday hal ku dhiga #FreePinto kaddib markii la shaaciyay go’aanka ay Manchester City ku seegayso tartamada Yurub labada xilli ciyaareed ee soo socda.
Jamaahiirta Borussia Dortmund aya xalay ahaa kuwa bilaabay ololaha loogu doodayo Pinto iyagoo kulan ay kooxdoodu ciyaaraysay sitay boodhadh ay ku codsanayaan in la fasaxo.
Shabakadda Football Leaks ayaa la sameeyay sanadkii 2015 waxaana ay tan iyo wakhtigaas shaaca ka qaaday canshuuraha ay lunsadeen xiddigo badani ilaa kooxaha sharciga jabiyay.
Pinto ayaa la sheegayaa inuu haysto 70 Milyan oo dhokumentiyo kala duwan ah oo ugu kaydsan keydiye (Memory) 3.4 Terabytes ah taas oo muujinaysa badnida xogaha uu haysto.